မြန်မာသတင်းစုံ – Page3– Welcome MMREPUBLIC
လာသမျှ လူတိုင်းကို ခြောက်တဲ့ ပြည်ဆေးရုံ အိမ်သာထဲက ဗိုက်ကြီးသည်သရဲ ဖြစ်ရပ်မှန်
“လာသမျှ လူတိုင်းကို ခြောက်တဲ့ ပြည်ဆေးရုံ အိမ်သာထဲက ဗိုက်ကြီးသည်သရဲ”ဆေးရုံတစ်ရုံရဲ့ မှုန်ပြပြမီးရောင်အောက်တွင် နန်းသီတာ တစ်ယောက် အိမ်သာသွားရန် အိပ်နေရာမှ ထလိုက်သည်။ လူနာခုတင်ထက်တွင် အိပ်ပျော်နေသော နန်းသီတာ ယောင်းမဖြစ်သူကို တစ်ချက်ကြည့် လိုက်သည်။ ယောင်းမကတော့ နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်ပျော်နေလေသည်။ ဘေးခုတင်ကလူနာစောင့်ကို အဖော်ခေါ်ရန် ကြည့်လိုက်တော့လဲ ဘေးခုတင်က လူနာဖြစ်သည့် မကေခိုင်ကလဲ အိပ်မောကျနေလေပီ…….အိမ်သာသွားချင်လွန်းလို့ ထလာရသော်လည်း.. လူသူကင်းမဲ့နေသော မှိန်ပြပြ မီးရောင်အောက်တွင် တစ်ယောက်တည်း လာခဲ့ရသဖြင့် တိတ်ဆိတ်မှုရဲ့ လှည့်ဖျားမှုအောက်တွင် အလွန်ခြောက်ခြားစရာကောင်းလှပေသည်။ ကော်ရစ်တာ တစ်လျှောက်တွင်လည်း သူမခြေသံမှ Read more
ရွာဦးကျောင်းက စေတီနဲ့ ဓမ္မာရုံ ပြုပြင်ဖို့ တစ်သက်လုံးရှာဖွေစုဆောင်းထားတဲ့ လက်ဝတ်ရတနာတွေ လှူဒါန်းခဲ့သူ မြန်မာအဒေါ်ကြီး
ပရိသတ်ကြီးရေ မြန်မာလူမျိုးဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာ အလှူအတန်းဆို ရက်ရောလှပါတယ်…ခုလည်းပဲရွာဦးကျောင်းက စေတီဓမ္မာရုံပြင်ဖို့ဆိုပြီး အမျိုးသမီးတစ်ဦးက တစ်သက်လုံးရှာထားတဲ့ လက်ဝတ်ရတနာတွေကို လှူခဲ့ပါတယ်… ထိုင်းနိုင်ငံမှာ နေထိုင်နေတဲ့ မြန်မာဘက်က စစ်ဘေးရှောင် ဒေါ်ဖေ့သည် တစ်သက်သာ ရှာဖွေပြီးစုစောင်းဝယ်ထားတဲ့လက်ဝတ်ရတနာနဲ့ တူ/တူမ တွေလက်ဆောင်ပေးထားတဲ့ လက်ဝတ်ရတနာအားလုံးကိုလှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ မိမိနေထိုင်တဲ့ ရွာဦးကျောင်းက ဘုန်းကြီးကျောင်း စေတီဓမ္မာရုံ ပြုပြင်ဖို့အတွက် ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်နှစ်သစ်အလှူဖြင့်လှူဒါန်းလိုက်တယ်ဟုသိရပါတယ်။ ဒေါ်ဖေ့ရဲ့ နှစ်သစ်နှစ်ဦးအလှူလို့လည်း ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီလိုသဒ္ဒါတရားထက်သန်းပြီး လှူဒါန်းမှုတွေပြုခဲ့တဲ့
“မသစ္စာ” “ရှင်…ကိုအေး” “ကျနော်..မသစ္စာ..ကို.ချစ်တယ်” “သိပါတယ်..ကိုအေး…ဒါပေမယ့် သစ္စာအကြောင်း ကိုအေးဘယ်လောက်သိလို့လဲဟင်” “ကျနော်သိသင့်သလောက်သိပါတယ်၊ မသစ္စာက အပျိုမဟုတ်ဘူး.. တစ်ခုလပ်ဆိုတာလေ” “ဟုတ်တယ်..ကိုအေး အဲဒါတွေကအမှန်ပဲ” “နောက်ပြီး မသစ္စာယောက်ျားကို ကျနော်မြင်ဖူးပါတယ်” “အော်..ဟုတ်လား” “ဟုတ်တယ်မသစ္စာ၊ ဒီလူက.လူယုတ်မာပဲ” “ဘာဖြစ်လို့လဲ” “မသစ္စာတို့အကြောင်းတွေလူတကာကိုလည်း ပြောနေတာ၊ အဲဒါမသစ္စာသိလား” “သိပါတယ်” “ဗျာ” “ဘာလဲ ကိုအေး.. သစ္စာကိုစိတ်ပျက်သွားပြီ မဟုတ်လား” “အဲလိုမဟုတ်ပါဘူးဗျာ၊ ကျနော်မသစ္စာကို လက်ထပ်ပါရစေ” “ကိုအေး..သေချာစဉ်းစားပြီးမှ ကျမဘဝကိုဝင်ခဲ့ပါ၊ ရှင်ပြန်ရုတ်သိမ်းချင်လဲ ဖြစ်ပါတယ်” “မဟုတ်ဘူး..မသစ္စာကျနော်မသစ္စာကိုချစ်တယ်၊ အဲဒါတွေသိနေတာကြာပါပြီ၊ ကျနော်သေသေချာချာ စဉ်းစားပြီးမှကို ချစ်ရေးဆိုခဲ့တာ၊ Read more
ဆရာမမြတ်ဝတ်ရည်ကို ကျောင်းစောင့်ငနီဆိုသူ နေ့တိုင်းလိုလို သူ့အခန်းထဲမှာ ဆွဲဆွဲစားနေကြောင်း ကျော်မျိုးနိုင်တစ်ယောက် သူငယ်ချင်းတွေထံမှ တစ်ဆင့်စကား ကြားဖူးခဲ့တာကြာပြီ။ ဆရာမမြတ်ဝတ်ရည်မှာ သူတို့ကျောင်းကို အရင်နှစ်ကမှပြောင်းရွှေ့လာသော အင်္ဂလိပ်စာပြဆရာမတစ်ယောက် ဖြစ်သည်။ အသက် ၃၀ ဝန်းကျင်ခန့်ရှိပြီး ရုပ်ရည်ရူပကာချောမောလှပသလို သူမရဲ့ ကိုယ်လုံးကိုယ်ထည် အဆက်အပေါက်ကလည်း တောင့်တင်းဖွံ့ထွားပြီး ရွှေရင်ထွားထွား တင်ပဆုံအိုးကြီးများ ပြည့်ပြည့်ကားကားနှင့် မြင်သူတကာ ဏှာထန်စေနိုင်လောက်သည့် ပုရိသယောက်ျားသားများအကြိုက် ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားပင် ဖြစ်သည်။ မွန်တရုတ်စပ် ဖြစ်ကာ အသားဖြူဖြူ အရပ် ၅ ပေ ၄ လက်မခန့်ရှိပြီး နိုင်ငံကျော် ရုပ်ရှင်မင်းသမီးတစ်ယောက်နှင့်ပင် Read more
အရမ်းချစ်ကြတဲ့ ချစ်သူနစ်ဦး မင်္ဂလာဆောင်ခါနီးမှာ သတိုးသမီး ယဉ်တိုက်မှုဖြင့်ပွဲချင်းပြီး သေဆုံး . . .
အရမ်းချစ်ကြတဲ့ ချစ်သူ ၂ ဦးမဂ်လာဆောင်ခါနီးမှာ ကတိုးသမီး ယဉ်တိုက်ဖြင့်ပွဲချင်းပြီး သေဆုံးသွားသည်ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ပထုံဌာနီခရိုင်၊ တလာဖွန်စာမြို့၊ ဝတ်မခေ ဘုန်းကြီးကျောင်းရပ်ကွက်နေArasdeg+Sahhet တို့ဟာချစ်သူသက်တမ်း (၇)နှစ်အကြာမှာ နှစ်ဖတ်မိဘများ၏သဘောတူခြင်းများဖြင့် မဂ်လာရက်မြတ် အားရွေးချယ်ပြီး ရက်သက်တစ်ပတ်အကြာ မဂ်လာဆောင်ခါနီး (၁)အလိုမှ Sahhet(ဇနီးလောင်)ဖြင့်သူမှ မင်္ဂလာပွဲးအတွက် လိုအပ်တာလေများသွားဝယ်ရင်း အခုလို ကားတိုက်ပြီး နေရာတွင်သေဆုံးသွားတာကြောင့် ကျန်ရစ်သူArasdeg(ခင်ပွန်းလောင်း)မှရူးမတတ် အော်ဟစ်ငိုကြွေးနေတဲ့ပုံရိပ်များပါ။ Credit –
ကျနော့် ရည်းစား လှိုင်လှိုင်နှင်းနဲ့ တွေ့ဖို့ သူမ အိမ်ဖက်ကို ကျနော် ဆိုင်ကယ်နဲ့ ထွက်လာခဲ့တယ်။ ကျနော့် နာမည်က ဝေယံ အသက်က ၂၀ ကျောင်းပြီးထားတာ မကြာသေးတော့ လောလောဆယ် အလုပ် အကိုင် မရှိ ၁၀၉ ၁၁၀ ပေါ့ဗျာ။ လှိုင်လှိုင်နှင်းက ၁၉ နှစ် သူမနဲ့ ရည်းဖြစ်တာ တစ်နှစ်လောက် ရှိပြီ။ လှိုင်လှိုင်နှင်းတို့ မိဘတွေနဲ့ ကျနော့် မိဘတွေက မိတ်ဆွေတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ လူကြီးချင်းကလည်း ခင်မင်နေတော့ လှိုင်လှိုင်နှင်းတို့ အိမ်ကို Read more
အခြေခံပညာအထက်တန်းများ ကျောင်းအပ်လက်ခံမည့်ရက်ကို ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီ
မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးက အခြေခံပညာစာသင်ကျောင်းတွေမှာ အထက်တန်းအဆင့် အတန်းတွေကို ဇူလိုင် ၂၁ ရက်နေ့ စတင်ဖွင့်လှစ်သင်ကြားသွားမှာဖြစ်ပြီး ဇူလိုင်လ ၁၃ ကနေ ၁၇ ရက်အထိ အထက်တန်းအဆင့်ကျောင်းအပ်နှံရေး သီတင်းပတ်အနေနဲ့ စတင်ကျောင်း အပ်လက်ခံသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းတွေ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ချိန်မှာ ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူတွေကို မိဘတွေရဲ့ အုပ်ချုပ်ထိန်းမှုအောက်မှာထက် မလျော့တဲ့ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်တွေအတိုင်း ဖွင့်လှစ်သွား မယ်လို့ အခြေခံပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယညွန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာတင်မောင်ဝင်းက ပြောပါတယ်။ ကျောင်းအပ်လက်ခံရာမှာ ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကို ပုံနှိပ်စာအုပ်တွေ အခမဲ့ ဖြန့်ဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး လက်ရှိမှာ ပုံနှိပ်စာအုပ်တွေကို ကျောင်းအားလုံးကို ဖြန့်ဖြူးထားပြီး Read more
”ဟယ် ကိုဇွဲ အရမ်းကြီးကိုထွားလာတာ ကြည့်စမ်း။အခုမှ တကယ့်ယောက်ကျားပီသလာတာ” ”မမ ကလဲအရမ်းကိုလှလာပါလားဟမ်။တသားမွေးတသွေးလှတဲ့။မမ မှအစစ်။ဒါနဲ့ ကိုကြီးစိုးခိုင်ရော” ”နင့်အကို စင်္ကာပူသွားတယ် ဒီမှာလေ နင့်တူမ ” ”မမနဲ့တူတယ် ကိုကြီးနဲ့လဲ တူတာပဲ ဘယ်နှစ်နှစ်လဲ သမီး” ”လေးနှစ်” ဇွဲပိုင်ဆိုတဲ့ကျွန်တော် အင်္ဂလန်ကနေပြန်ရောက်ပြီးနောက်ရက် မမဝတ်ရည်တို့သားအမိလာလည်တာပ င်။မမဝတ်ရည်က အရင်ကထက်ကို လှလာသည်။ ကိုယ်လုံးကလဲအရင်ကထ က် ပိုပြီးဖွံ့လာကာ ကလေးတယောက်အမေလို့ ပြောရင်ယုံမှာမဟုတ်။အသက်ကသုံးဆယ်ငါးလောက်ရှိပြီ။သူ့ထက် ခုနှစ်နှစ်လောက်ကြီးတာမို့သူကခု နှစ်ဆယ့်ရှစ်ဆိုတော့ မမဝတ်ရည်အေးက သုံးဆယ့်ငါးလောက်ရှိပြီဆိုေ ပမယ့် Read more
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် အစားထိုး သင်္ကြန်ပွဲတော်ကို ဇူလိုင် (၄)ရက်၌ စတင်ကျင်းပရန် လျာထား . . .
ထိုင်းနိုင်ငံတွင်အစားထိုးသင်္ကြန်ပွဲတော်ကိုဇူလိုင်(၄)ရက်၌စတင်ကျင်းပရန်လျာထားထိုင်းနိုင်ငံကCOVID 19 ကြောင့်ဧပြီလကမကျင်းပခဲ့ရသည့် သင်္ကြန်ကာလကိုမိုးရာသီဖြစ်သည့်ဇူလိုင်လတွင်အစားထိုးပြန်လည်ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီးလူစုလူဝေးမဖြစ်စေရန်တင်းကြပ်စွာစီမံဆောင်ရွက်သွားမည်ဟုသိရသည်ကျွန်တော်တို့အများကြီးတော့ သတိထားစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဟုယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးIttipol Khunpluemက​ပြောသည်။ သင်္ကြန်ပွဲတော်ကိုအစားထိုးကျင်းပရန်လျာထားသည့်အစီအစဉ်အရဇူလိုင်လ(၄)ရက်နေ့မှ(၆)ရက်နေ့အထိကျင်းပမည်ဖြစ်ကာသင်္ကြန်နှင့်တွဲသည့် အစားထိုးပိတ်ရက်အဖြစ်ဇူလိုင်(၇)ရက်နေ့မှ(၉)ရက်အထိ​ပေးရန်စီစဉ်ထားရာစုစုပေါင်းပိတ်ရက်(၆)ရက်ရရှိကြမည်ဖြစ်သည်။အဆိုပါလျာထားအစီအစဉ်ကို၂၀၂၀ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၅)ရက်နေ့အစည်းအဝေး၌​ဆွေးနွေးကြမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ပြည်ပမှာလုပ်ကိုင်နေကြသူတွေရဲ့ ဝင်ငွေက သူတို့မိသားစုအတွက်ပဲလို့မမြင်ကြဖို့လည်းပြောခဲ့ပါတယ်။ ပြည်တော်ပြန်တွေကို ရောဂါပိုးရှိနိုင်တယ်ဆိုပြီး အစိုးရိမ်လွန်ရာကနေ ဒေါသဖြစ်တာမျိုးတွေ ရှိနေပြီး နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ ခက်ခက်ခဲခဲ ရုန်းကန်ဝမ်းစာရှာနေရတာကို နားလည်ဖို့ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြည်သူတွေတွေကို တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒီကနေ့ မေလ ၃ ရက်နေ့က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ Facebook အကောင့်ကတစ်ဆင့် အသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။ “ အချို့က ပြည်တော်ပြန်တွေ ရောဂါပိုးရှိနိုင်တယ်ဆိုပြီး အစိုးရိမ် လွန်ရာက ဒေါသဖြစ်ကြပါတယ်။ ဘယ်သူမှ ရောဂါမဖြစ်ချင်ကြ ပါဘူး။ ဘယ်သူကမှလည်း နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ ပင်ပင်ပန်းပန်းသွားပြီး ဝမ်းစာမရှာချင်ကြပါဘူး။ နယ်စပ်က Read more